Manainga ny zavakanto an-dalambe manerana an’i Etazonia ny famonoana tao #Ferguson · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2019 16:08 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Français, Italiano, русский, polski, Español, srpski, English
“Fampisaintsainan'ilay hafatra momba ny fifamoivoizana” ao Ferguson, Missouri. Sary an'i Light Brigading ao amin'ny Flickr.
Nisy fandikàna ara-javakanto goavana tao an-toerana sy manerana an'i Etazonia ireo korontana tao Ferguson, ao Missouri, nateraky ny famonoana ilay tovolahy tanora, Michael Brown, 18 taona, nataonà mpitandro filaminana fotsy hoditra iray.
Maro ireo mpanakanto sy mpanao seho an-tsehatra no hita tanatin'ireo famoriam-bahoaka sy fiaretantory tao/mikasika an'i Ferguson, izay mbola hiantsoan‘ireo mpanohitra mafy ny rariny taorian'ny fanapahankevitra ny tsy hanenjika ilay mpitandro filaminana Darren Wilson izay nitifitra an'i Michael Brown.
“Hitsangana izahay – aty am-pelatananay ny fandriampahalemana” Fitaratra anà tranombarotra iray nolokoina tamin'ny lohahevitr'i Ferguson. Sary an'i Paul Sableman ao amin'ny Flickr.
Tamin'ny fihaonana Rariny Ho An'ny Rehetra tao Washington DC, 13 Desambra 2014. Sary an'i Stephen Melkisethian ao amin'ny Flickr.
Toa mitsiry isan'andro amin'ny alalan'ireo fihetsiketsehana sy vondrompiarahamonina ny Zavakanto an-dalambe, tafiditra anatin'izany ny graffitti, petadrindrina sy sorabaventin'ireo famoriam-bahoaka. Vao nanamarina ny lahatsoratra iray tao amin'ny tranonkalam-baovao Mic fa i Fergurson, Missouri, no manana ny “Zavakanto an-dalambe matanjaka indrindra manerana an'i Amerika iray manontolo”, ary manolotra tanora mpanakanto iray, Damon Davis, izay mpamorona graffitti sy sary haingon-drindrina amin'ny alalan'ny petadrindrina maneho sarin-tànana ao an-tanàna. Miara-miasa aminà tsenambarotra sy orinasa maro ao an-toerana ihany koa i Davis mba hamoronana ireo asa vokariny. Toy ny azavainy, raha toa ka maniry ny hanampy sy hanohana ireo mpanao hetsipanoherana ny mpampiasa sy tompon'orinasa maro, mbola misy kosa ireo te hijanona ho “tsy miandany”. Fa manamarika ihany koa i Davis:
Raha mampidi-bola an-damosin'ity vondrompiarahamonina ity isika, tsy misy ny tsy fiandaniana.
Nasaina mba handray anjara na handefa ny asany tamin'ny fiaretantorin'ny fanoherana tao Wynwood (Miami) ihany koa i Davis sy ireo mpanakanto hafa, mifanjohy amin'ilay Miami Art Basel malaza dia malaza no sady tena voarakotry ny haino amanjery be. Tsenaben'ny kanto ankehitriny izay tsidihan'ny olomalaza sy mpanakanto malaza maro, nefa tena voatsikera be koa tamin'ity taona ity noho ny fandosirany ny zavamisy.
Na izany aza, mba nisy sanganasa iray fara-faharatsiny nifandraika tamin'ilay hetsika izay nampisendoatra an'i Amerika tamin'ny 2014 : sary hosodoko iray toy ny tena izy izay nataon'i Robert Longo, nitondra ny lohateny hoe “Untitled” (Ferguson Police August 13 2014)”. Nantsoin'ny sasany ho toy ny “taokanto matanjaka indrindra tamin'ny Art Basel Miami Beach” ilay sary hosodoko goavambe. Tamin'ity sary hosodoko maizina ity, lasa toy ny hery tsy miavaka no sady tsy misy tava ny laharan'ireo mpitandro filaminana, mandroso mankany amin'ireo mpijery mamakivaky setroka be, izay azo antoka fa entona mandatsa-dranomaso.
Ivelan'ilay Tsenaben'ny Art Basel tao Miami, mandro ao anaty tontolon'ny kanto, nisy fiaretantory iray nokarakaraina izay nanomezan'ireo olona tao an-toerana fotoana ahatsiarovana ireo maty noho ny herisetran'ny mpitandro filaminana. Tao amin'ny pejy Facebook-ny, nanazava ireo mpikarakara:
Omaly alina, nanao ny ‪#‎ShutItDown‬ izahay, nakatonay ny lalana sy ny ampahany tamin'ny #‎ArtBasel‬‬, ilay hetsika ara-kanto lehibe indrindra ato amin'ny firenena, tamin'ny fangatahana ny rariny ho an'i #‎IsraelHernandez‬, ‪#‎MikeBrown‬, ‪#‎EricGarner‬ ‬sy ireo rehetra tsy tamby isaina niharan'ny herisetran'ny mpitandro filaminana!
Nomena fifantohana manokana ny fahafatesan‘i Israel Hernandez, mpanao graffitti iray tsy ampy 20 taona akory tamin'ny 2013, novonoin'ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny Taser rehefa tratrany nandoko rindrina teny amin'ny faritry ny McDonald efa tsy niasa intsony i Israel. Mpanakanto an-dalambe tena nanan-talenta i Hernandez , nahazo loka maro noho ireo graffitti nataony nandritra ny fiainana kely nolalovany. Niteraka hetsi-panoherana maro ny fampiasana tsy rariny ny Taser izay ataon'ireo mpitandro filaminana ny fahafatesany ary nanentana ilay horonantsary fanadihadiana “Tasered: The Israel Hernandez Story”.
Lasa hetsika fanoherana ny fanavakavahana volon-koditra tany amin'ny firenena Amerikana maro ihany koa ireo fitakiana ny rariny ho an'ireo rehetra niharan'ny herisetran'ny mpitandro filaminana ary miparitaka maneran-tany ny tantaran'izy ireo. Avy amin'ny graffitti ao Brooklyn, New York, mampiseho zazalahy manangan-tanana miaraka amin'ny teny hoe “Aza mitifitra”, ka mankany amin'ny aoLondra, Angletera, miaraka amin'ny zazalahiny manangan-tànana ary mitondra ireo teny ireo ihany izay mibahana ny sary:
Graffitti ao Brooklyn, New York ho fiaraha-mientana amin'ireo hetsipanoherana ao Ferguson, Missouri. Sary avy amin'i Damien Derouene ao amin'ny Flickr.
Graffitti ao Londra, Angletera, ho fiaraha-mientana amin'ireo hetsipanoherana ao Ferguson, Missouri. Mivezivezy be ao anaty Aterineto ilay sary.
Tao Ferguson, nanitrikitrika ny hasarobidin'ireo mpanakanto ilay mpanao graffitti, Damon Davis:
Manana anjara asa lehibe ny mpanakanto amin'ny fitantarana ireny tantara ireny sy amin'ny fitazonana ho velona ny fahatsiarovana. Zava-dehibe ny [petadrindrina] ho an'ireo afaka mijery izany ka tsy mandray andraikitra. Mety hiova hevitra izy ireo [ary hanomboka hanohana anay]. Ary ireo tsy momba anay kosa … fantany amin'izay izao fa eo foana izahay. Ary tsy hilefitra izahay.